MNA လေယာဉ်ပါ ခရီးသည်တွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူးနဲ့ အဖွဲ့ကို ရွှေဒင်္ဂါးပြား လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ နေမင်း - Myanmar Daily Time
HomeCELEBRITYMNA လေယာဉ်ပါ ခရီးသည်တွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူးနဲ့ အဖွဲ့ကို ရွှေဒင်္ဂါးပြား လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ နေမင်း
MNA လေယာဉ်ပါ ခရီးသည်တွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူးနဲ့ အဖွဲ့ကို ရွှေဒင်္ဂါးပြား လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ နေမင်း
May 20, 2019 admin CELEBRITY Comments Off on MNA လေယာဉ်ပါ ခရီးသည်တွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူးနဲ့ အဖွဲ့ကို ရွှေဒင်္ဂါးပြား လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ နေမင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ(၁၂)ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်-မန္တလေးလေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MNA လေယာဉ် စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေအတော်များများ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်..။
လေယာဉ်ရှေ့ဘီးချမရလို့ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ပြီး တော်လွန်းတဲ့ လေယာဉ်မှူးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ခရီးသည်တွေအားလုံး အသက်အန္တရာယ်ကင်းလွတ်ခဲ့တဲ့အတွက် လိုက်ပါသူခရီးသည်တွေကလည်း လေယာဉ်မှူးနဲ့အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြပါတယ်..
MNA လေယာဉ်မှာ လိုက်ပါလာတဲ့ ခရီးတွေ စုပေါင်းပြီး လေယာဉ်မှူးဦးမြတ်မိုးအောင်နဲ့ အဖွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုပွဲလေး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော နေမင်းကလည်း တစ်ကျပ်သားရွှေဒင်္ဂါးပြားပေးအပ် ဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်..။
ခရီးသည်တွေ အားလုံး ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ ဂုဏ်ပြုပွဲလေးမှာ အခြားခရီးသည်တွေနဲ့အတူ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသားနေမင်း၊ စည်သူမောင်နဲ့ မုဏ်းတို့ကလည်း ဂုဏ်ပြုငွေများနဲ့အတူ အသီးသီး ပါဝင်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်..။
Hands Start Shaking After2Minutes Of Playing This Game
Close Your Door Tight And Start Playing This Game!
Take Shower Before Playing This Game
Make Sure Nobody Sees You When Playing This Game
Never sleep again after playing this game
Who Is The Hottest Female Of Naruto? Decide In The Game
87% Of Men Can’t Play This Game For More Than5Minutes
MNA လေယာဉ်ဖြစ်စဉ်မှာ ခရီးသည်များအားလုံး အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အောင်မြင်စွာ ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်မှူး ဦးမြတ်မိုးအောင်နဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း (၇) ဦးတို့ကို ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကို မေလ (၁၉) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ Novotel ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော နေမင်းကတော့ ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားနေ့လေးမှာပဲ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ဂုဏ်ပြုပွဲလေးကို မတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး..။
ပရိသတျကွီးရေ.. ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ(၁၂)ရကျနကေ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ရနျကုနျ-မန်တလေးလကွေောငျးလိုငျး တဈခုဖွဈတဲ့ MNA လယောဉျ စကျခြို့ယှငျးမှုဖွဈခဲ့ပွီး ပရိသတျတှအေတျောမြားမြား အထိတျတလနျ့ဖွဈခဲ့ကွရပါတယျ..။
လယောဉျရှဘေီ့းခမြရလို့ အရေးပျေါဆငျးသကျခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဆုံးဖွတျခကျြမှနျကနျပွီး တျောလှနျးတဲ့ လယောဉျမှူးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကွောငျ့ ခရီးသညျတှအေားလုံး အသကျအန်တရာယျကငျးလှတျခဲ့တဲ့အတှကျ လိုကျပါသူခရီးသညျတှကေလညျး လယောဉျမှူးနဲ့အဖှဲ့ကို ပွနျလညျဂုဏျပွုပေးခဲ့ကွပါတယျ..
MNA လယောဉျမှာ လိုကျပါလာတဲ့ ခရီးတှေ စုပေါငျးပွီး လယောဉျမှူးဦးမွတျမိုးအောငျနဲ့ အဖှဲ့ကို ဂုဏျပွုပှဲလေး ပွုလုပျခဲ့ကွပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော သရုပျဆောငျမငျးသားခြော နမေငျးကလညျး တဈကပျြသားရှဒေင်ျဂါးပွားပေးအပျ ဂုဏျပွုခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ..။
ခရီးသညျတှေ အားလုံး ဂုဏျပွုခဲ့ကွတဲ့ ဂုဏျပွုပှဲလေးမှာ အခွားခရီးသညျတှနေဲ့အတူ အနုပညာရှငျတှဖွေဈကွတဲ့ မငျးသားနမေငျး၊ စညျသူမောငျနဲ့ မုဏျးတို့ကလညျး ဂုဏျပွုငှမြေားနဲ့အတူ အသီးသီး ပါဝငျဂုဏျပွုပေးခဲ့ကွတာ တှရေ့ပါတယျနျော..။
MNA လယောဉျဖွဈစဉျမှာ ခရီးသညျမြားအားလုံး အန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ အောငျမွငျစှာ ဆငျးသကျနိုငျခဲ့တဲ့ လယောဉျမှူး ဦးမွတျမိုးအောငျနဲ့ လယောဉျအမှုထမျး (၇) ဦးတို့ကို ဂုဏျပွုပှဲ အခမျးအနားကို မလေ (၁၉) ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့ Novotel ဟိုတယျမှာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ..။
ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကြျော သရုပျဆောငျမငျးသားခြော နမေငျးကတော့ ဂုဏျပွုပှဲအခမျးအနားနလေ့ေးမှာပဲ ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ ဂုဏျပွုပှဲလေးကို မတကျရောကျဖွဈခဲ့ပါဘူး..။
တရုတ်နယ်စပ်ကျယ်ဂေါင်မှ မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို တရုတ်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး ရိုက်နှက်စစ်ဆေး(ရုပ်သံ)
This Month : 59376
This Year : 375602
Total Users : 401487
Total views : 1152814